မိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအပူတက် | | Martech Zone
မိုဘိုင်းလုပ်ငန်းသည်အမှန်တကယ်အရှိန်မြှင့်နေပြီးမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်အမှန်ပင်သေချာသည်။ အကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုများမှာ third party app များကိုသုံးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဈေးကွက်လေ့လာမှုကုမ္ပဏီ ABI Research မှထုတ်ပြန်သည့်ခန့်မှန်းချက်အသစ်အရမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှရရှိသောဝင်ငွေသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလီယံအထိမြင့်တက်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ရင်းမြစ် - ပြင်းထန်သောကြိုးမဲ့ မှ ABI Research မှ.
ကျော်နှင့်အတူ Apple ရဲ့ iPhone က ဦး ဆောင် ၉ လတာအတွင်းအက်ပလီကေးရှင်း ၁ ဘီလီယံဒေါင်းလုပ်ချ, Blackberry, Verizon, Microsoft နှင့် Android တို့သည်သေချာပေါက်လိုက်နာသည်။ ဖုန်းအသစ်များတွင် resolution မြင့်မားခြင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ဖုန်းအသစ်များတွင်ကီးဘုတ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခြင်းတို့သည်အပြောင်းအလဲမြန်နှုန်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်တို့နှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းကိုဖွင့်ပေးသည်။ စျေးကွက်ရှိကစားသမားဟောင်းများပြန်လည်မွေးဖွားလာကြပြီ… Nokia N97 ကိုစစ်ဆေးပါ။ (LL Cool J နှင့်အတူဗိုင်းရပ်စ်ကြော်ငြာကိုနှစ်သက်ပါ)
အကယ်၍ ဗွီဒီယိုကိုသင်မတွေ့ပါက၊ ပို့စ်ကိုနှိပ်ပြီး၊ မိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း Up ကိုအပူ။ ငါမိုဘိုင်းနှင့်အတူတက်မမီကြဘူးသကဲ့သို့ငါစာသားရုံ ... ဘလက်ဘယ်ရီကိုဘွဲ့ယူသည်။ သူငယ်ချင်းနှင့် မိုဘိုင်းစျေးကွက် ဂုရု၊ အာဒမ်စ်သည်မကြာမီတွင်စာအိတ်အချို့ရေးသားလိမ့်မည် Martech Zone ငါမျှော်လင့်တယ်!
14:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 43
မိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသော post ကို! ငါပံ့ပိုးရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။